Banyere juyou - Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd.
Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd., nke etolitere na 2014, bụ onye otu China organosilicon fluorine Association, ọkachasị na -emepe, mepụta na ire ihe ọhụrụ polymer organosilicon.
Juyou gbara mbọ na mmepe, nrụpụta, ngwa na ọrụ nke ihe silicone ọhụrụ. N'otu oge ahụ, o guzobela mmekorita mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha iji nọgide na-arụkọ ọrụ ogologo oge nke "mmepụta, mmụta na nyocha", ma na-abawanye itinye ego na ntinye teknụzụ na nyocha ngwaahịa ọhụrụ na mmepe, ma na-akwalite ihe ọhụrụ na-aga n'ihu. njikarịcha ngwaahịa ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọrụ nka gụrụ akwụkwọ nke ukwuu. Site na ndị otu nkwado teknụzụ siri ike yana netwọ ahịa ahịa siri ike, anyị nwere ike nye ndị ahịa ọrụ nkwado teknụzụ dị mma yana ọtụtụ usoro ngwaahịa zuru oke. (ikike nyocha sayensị)
Changzhou Juyou New Material Technology Co., Ltd. hiwere na 2014, nke bụ ụlọ ọrụ dị elu na-ejikọ R&D, mmepụta na azụmaahịa. Companylọ ọrụ ahụ na -agbaso ụkpụrụ isi mmalite dị elu, ọkwá dị elu, arịrịọ nchebe gburugburu ebe obibi dị elu yana imepụta akpaaka, yana ịkwanyere ụlọ ọrụ kemịkalụ ọkachamara ime ụlọ maka imewe na imepụta ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na ịchekwa ike, nchekwa gburugburu ebe obibi na akụrụngwa dị mma. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike imepụta ụdị ngwaahịa silicon dị iche iche nwere ikike mmepụta kwa afọ nke tọn 15,000 maka ihe ọ bụla yana mmepụta ihe karịrị tọn 6,000 kwa afọ. (ike ụlọ ọrụ)
Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ngwaahịa ụlọ ọrụ anyị emechala ndebanye aha European REACH ma bupụ ya n'ahịa mba ofesi, gụnyere United States, Europe, Asia, Southeast Asia na obodo na mpaghara ndị ọzọ. Ngwaahịa anyị bụ isi viscosity dimethyl silicone mmanụ maka ihe ịchọ mma, viscosity viscosity dimethyl silicone oil, silicone emulsions, polyether gbanwetụrụ mmanụ silicone, ndị na -ehicha silicone, mkpuchi akwa silik. A na -ejikarị ngwaahịa ndị a eme ihe ntecha, akwa, owuwu, mkpuchi, elektrọnik, ọrụ ugbo, ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ ala ike ọhụrụ, mgbakọ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ anyị adọtala ọtụtụ ndị ahịa ụlọ na mba ofesi nwere ezigbo mma na ike mmepụta ike, na enjnwere aha ọma na ụlọ ọrụ. (Ngwaahịa)
Ike mmepụta zuru oke oge nnyefe kwụsiri ike